Teknụzụ Teknụzụ Achọrọ Kachasị | Martech Zone
Izu-ụka ole na ole gara aga, nne m nwere ezigbo ụjọ na obi ya chọrọ ka o were a defibrillator oge niile. Usoro a nyochara ma bulite data obi ya site na ihe mmetụta dị na uwe, ga-adọ aka na ntị ma ọ bụrụ na enwere ọnọdụ ihe mmetụta, na - ma ọ bụrụ na mwakpo obi - ga - adọ ndị na - eguzo aka na ntị ịlaghachi na ọ ga - emebi onye ọrịa ahụ. Mara mma egwu stof - ma dịkwa mma. O nyeere ya aka ịbịa nleta dị mkpa ma nwee udo nke uche na a na-enyocha ya. Nke ahụ bụ teknụzụ wearable nke na-agbanwe ụwa! (BTW: Mama m agaghizi eji ya. Mgbe ọ lọtara, ọ mere katidoriọza, ọ nweghị nsogbu a chọtara. Daalụ ịdị mma!)
wearable, saịtị na-ekwurịta banyere teknụzụ ejiji ejiji, ajụọla ndị teknụzụ ụdị ụdị teknụzụ ha ga - achọ - ma ha mepụtara ihe ọmụma dị n'okpuru ebe a na nzaghachi. Nke a abụghị ihe nchekwa ndụ dị ka Lifevest, mana ọ bụ teknụzụ nwere ike ime ka ndụ anyị niile ka mma.
O doro anya na enwere m Google Glass na a Obere okwute# # 1 na # 2 na ndepụta ahụ. Nke a bụ nanị m abụọ cents, ma m na-akwụsị yi ma… ha nanị emeghị ka mma arụmọrụ m ma ọ bụ gbanwee ndụ m n'ụzọ ụfọdụ. Elekere Pebble nwere ụfọdụ ihe dị jụụ… dị ka igosi m onye na-akpọ na ekwentị m ma ọ bụrụ na m nọ na nzukọ ma ekwentị m agbanyela… mana ọ ghọrọ ihe ndọpụ uche karịa enyemaka. Ikuku Google emeghị m ihe ọ bụla - echere m na Glasshole bụ aha na-atọ ọchị mana ọ dabara adaba maka ọtụtụ ndị mmadụ m na-ahụ ka ha na-eyi. Chetara m ihe gbasara Bluetooth ebe, nwa oge, ụyọkọ ndị nzuzu ga-eso ha na-agagharị na ntị ha ma yie ka ha na-agwa onwe ha okwu n'ime agwa ọjọọ.
Ana m atụ anya ihe Apple nwere ike ime iji gbanwee ụlọ ọrụ a. Ọ bụrụ na m nwere ike ịnweta ọtụtụ ngwa m site na ngosipụta retina na nkwojiaka m nke dị mma ịgụ (kama ngosipụta Pebble nke dị ka ihuenyo Nintendo nke 20 afọ), enwere m ike iyi uwe ahụ n'ezie ma ọ bụrụ na ọ dị mma na arụ ọrụ dị ukwuu. Echere m na anyị nwere ọtụtụ ihe ị ga-arụ! Kedu ihe ị chere?
Tags: iko googleokwute smart watchigwe igwesmartwatchteknụzụ siri ike